DEG-DEG: Musiibada Dhaawacyada Real Madrid Oo Sii Socota, Mendy, Nacho & Casemiro Oo Maqnaanshaha Kula Biiray Ramos Iyo Varane - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Musiibada Dhaawacyada Real Madrid Oo Sii Socota, Mendy, Nacho & Casemiro Oo Maqnaanshaha Kula Biiray Ramos Iyo Varane
April 17, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 1
Real Madrid ayaa shaacisay musiibo kale oo dhaawacyo ah oo Zinedine Zidane ku yaraynaya xulashada, waxaana uu difaac dhexe haystaa kaliya Eder Militao oo ciyaarta Getafe ee habeen dambe dheeli doona, waxaana Zidane dantu ku qasbi doontaa in dhinaca bidix uu kusoo celiyo Marcelo oo xilli ciyaareedkan kaydku daashaday.
Difaaca Faransiiska ah ee Ferland Mendy ayaa dhaawac kasoo gaadhay muruqa, waxaana war-saxaafadeed ay kooxdu soo saartay ay ku sheegtay in laga daaweeyey dhaawac kasoo gaadhay muruqa, laakiin kooxdu si rasmi ah uma shaacin muddada uu garoomada ka maqnaanayo.
Wararka hordhaca ah ayaa waxay sheegayaan in Mendy uu seegayo ciyaarta Getafe ee Axadda, uuna u baahan doono waqti kale oo uu kusoo kabto.
Warbixinta caafimaadka ayaan sheegin khatar sii badan, waxaanay warbaahinta Spain tibaaxeen in uu u baahan yahay illaa toddobaad kale oo uu kaga soo kabto dhaawaca, taas oo ka dhigan in uu seegayo ciyaarta Getafe iyo midka dhamaadka usbuuca ee Cadiz.
Zinedine Zidane ayaa hore ay kooxdiisa dhaawacyo iyo fayraska korona ay ugaga maqnaayeen difaacyada Sergio Ramos, Raphael Varane, Lucas Vazquez iyo Dani Carvajal, waxaase tababarka kusoo laabtay difaaca midig ee Carvajal oo la filayo in uu qayb ka noqdo liiska ciyaartoyda ee kulanka Getafe inkasta oo ay adag tahay in lagu soo bilaabo.
Waxa kale oo Real Madrid ganaaxyo kaga maqan kulanka Axadda difaaca reer Spain ee Nacho iyo kubbad-burburiyaha Brazil ee Casemiro oo kaadh cas qaatay kulankii Barcelona.
Zidane ayaa difaaca dhexe ka ciyaarsiin doona laacibka da’da yar ee Victor Chust oo garab istaagi doona Militao, waxaanay hore labadan laacib u wada ciyaareen kulankii ay kaga hadheen Copa del Rey ee ay kooxda Alcoyano ay kusoo reebtay.
cabdiraxmaan caseer says:
booqo cabdiraxmaan.com oo ka hel casharo bilaash ah.